टीकापुरका दुई युवाले थाले ‘टिस्यु कल्चर’बाट केराको बेर्ना उत्पादन शुरु – osnepal tv
कैलालीका दुई युवा कैलालीको टीकापुरमा ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट केराको बेर्ना उत्पादन कार्यमा लागेका छन् । केराखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि युवाको आकर्षण बढ्दै गइरहेका बेला टीकापुरका दुई युवा कृषकले टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट केराको बेर्ना उत्पादन शुरु गरेका हुन् ।
उहाँ नर्सरीमै निकै सजगताका साथ हुर्किने हुनाले टिस्युकल्चर बिरुवा अन्यको तुलनामा रोग कम लाग्ने, बढी फल दिने, रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने बताउनुहुन्छ । कृषि विज्ञ तिवारीका अनुसार नेपालमा टिस्यु कल्चर प्रविधिको ल्याब छैन । भारत लगायतका अन्य देशबाट टिस्यु कल्चर गरेर ल्याइएको बिरुवा केही महँगो पर्न जान्छ ।
नेपालमै यसको ल्याब र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके बिरुवाको बेर्ना उत्पादन गर्न सस्तो हुने उहाँले बताउनुभयो । हाल नेपालमा टिस्यु कल्चर प्रविधिका बिरुवाहरु विशेषगरी भारतबाट आउने गरेका छन् । कैलाली जिल्लामा ७३० हेक्टर जमिनमा केरा खेती गरिएको छ र वार्षिक १० हजार ९५० टन केरा उत्पादन हुन्छ ।(रासस)
Previous article शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुल्झाउन मन्त्री पोखरेललाई दशबुँदे ज्ञापनपत्र
Next article के ढाड दुख्ने समस्याले हैरानी खेप्नुभएको छ ? यसो गर्नुस
के ढाड दुख्ने समस्याले हैरानी खेप्नुभएको छ ? यसो गर्नुस